Dukaanleyda Feejignaanta: Tafaariiqda waxay kasbataa faallooyin ka badan inta maqaayadaha Yelp | Martech Zone
Waad maqashaa TripAdvisor, waxaad u maleyneysaa hotels. Waad maqashaa Darajooyinka Caafimaadka, waxaad u maleyneysaa dhakhaatiirta. Waad maqashaa Yelp, iyo fursadaha waa fiican yihiin oo aad u maleyneyso maqaayadaha. Taasi waa dhab ahaan sababta ay lama filaan ugu noqotay milkiileyaasha ganacsiyada maxalliga ah iyo kuwa wax iibiya inay wax akhriyaan Tirakoobka u gaarka ah ee Yelp kaas oo sheegaya, in ka mid ah 115 milyan ee dib u eegista macaamiisha Yelpers ay ka tagtay tan iyo markii la bilaabay, 22% waxay la xiriiraan dukaamaysiga vs. 18% oo la xiriira maqaayadaha. Sumcadda tafaariiqda, markaa, waxay ka kooban tahay qaybta ugu weyn ee ka kooban waxyaabaha ay ka kooban tahay Yelp, iyadoo u muujineysa shirkadaha leben-iyo-hoobiyeyaasha ah in dayactirka joogitaanka firfircoon ee Yelp ay tahay shuruud suuq-geyn raadinta maxalliga ah.
Tusaalaha dhabta ah ee dhabta ah: hubi dukaamada hagaajinta guryaha ee ugu sarreeya Yelp aagga San Francisco Bay. Tirada badan ee dib u eegista xarumaha qaarkood ay kasbadeen waa mid cajiib ah. Waxaan aragnaa Sicir-dhimista Dhismooyinka (250), Lowe's Home Improvement (427), Cole Hardware (297) iyo Cliff's Variety (461). Isku darka noocyada waaweyn iyo tafaariiqleyda madaxa bannaan waxay muujineysaa guud ahaan dib u eegista ku dhowaad ganacsi kasta oo jeclaan lahaa inuu kasbado, haddii ay ku jiraan dareen qumman.
Laakiin waa tan qabashada: Tilmaamaha dib u eegista Yelp ayaa ah kuwa ugu adag adduunka dib u eegista macaamiisha, si gaar ah uga mamnuucaya shirkadaha inay toos u weydiistaan ​​macaamiisha dib u eegis. Marka sidee baa ganacsiga tafaariiqda loogu tartami karaa Yelp iyadoo waliba loo hoggaansamayo tilmaamaha? Halkan waxaa ah 5 talo oo kaa caawinaya inaad taas sameyso.
1. Ka Fogoow Kheyraadka Cunitaanka
Waa muhiim in la fahmo inay tahay in ganacsigaagu go'aansado inuu iska indhatiro tilmaamaha Yelp oo uu bilaabo inuu weydiisto dhammaan macaamiisha inay dib kuugu eegaan Yelp, dib u soo celintaada maalgashiga dadaalka waxaa laga yaabaa inaanu ahayn mid qiimo leh. Weydiinta qofkasta inuu kufiiriyo adiga oo aan horeyba u dhisnayn Yelper lehna ugu yaraan 5 dib u eegis ayaa caadi ahaan horseedi doonta in ra'yi dhiibashadooda la sifeeyo. Iyo, qaab xisaabeed isticmaale cusub oo ka tagaya dib u eegista meheraddaada ayaa kor u qaadi kara calammo casaan leh dib-u-eegista weyn.
Adoo maskaxda ku haya tan, iyo sidoo kale u fiirsashada taas Yelp waxay si cad u ceebeysay xadgudubyada tilmaamaha waagii hore, inaad ka fogaato macaamiisha macno-la'aanta ah ee guud ahaan weydiisashada dib-u-eegista Yelp waxay ilaalin doontaa ilahaaga (iyo suurtogalnimada sumcaddaada), waxay kuu sii deyneysaa inaad isku daydo farsamooyin kale.
2. Soo dhaweyso heer sare oo heer sare ah
Daraasad macaamiil ah oo ay samaysay barnaamijka dib u eegista ee GatherUp ayaa lagu ogaaday in si buuxda 25% ee dib u eegista waxay ka timid khibradaha macaamiisha ee gaarka ah. Jaantuskani wuxuu si xoog leh u muujinayaa in mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee loogu dhiirrigeliyo dadka isticmaala Yelp inay dib u eegaan meheraddaada iyada oo aan la weydiinin inay ka badan tahay filashooyinkooda waqtiga adeegga. Haddii aad ka aqriso waxyaabaha caanka ah 'dib u eegista Yelp, waxaad ogaan doontaa dhacdooyinka joornaalka ee Yelpers ee kor u qaaday iyaga: karraaniga ku soo orday goobta gawaarida la dhigto si uu u keeno shey la ilaaway, iibiye bixiye aqoon daacad ah halkii uu ka iibin lahaa mid adag, ganacsi waxay si farxad leh u dalban doontaa shay kasta oo aysan horey u dhigin.
Waxay noqon kartaa wax fudud sida edbinta lagu daray ama sida cajiibka ah ee ah 'wow' qodob weyn oo macaamilku uusan fileynin taas oo u kaxeyn doonta Yelp si ay waqtigooda firaaqada ah ugu qaataan si iskood ah ula wadaagaan farxadooda. Haddii ganacsigaagu u baahan yahay dib-u-eegis dheeraad ah oo 'Yelp' ah, hubi siyaasadaha iyo adeegga adeegga macaamiisha si aad u aragto haddii aad u beddeli karto wax-qabadyada ugu yar-yar ee guusha weyn.
3. Noqo Adhijir Adag
'Maskax dhaqashada' maahan sharraxayaasha ugu macaan ee ku dhejiya macaamiisha ama dib-u-eegeyaasha, laakiin waxay ahayd u ​​kuurgelidda cilmu-nafsiga aadanaha tan iyo qarnigii 19aad in facooda ay saameyn ku yeeshaan dhaqanka dadka. Hal dariiqo oo aad u fudud oo lagu hagi karo Yelpers ayaa kuu daayay dib u eegis (adigoon weydiinin) waa inaad tusto kuwa kale inay leeyihiin. Hababka soo socda ee kor loogu qaadayo joogitaankaaga Yelp ayaa ahaa si cad ay u ansixiyeen iyaga:
Muuji dib u eegistaada ugu wanaagsan ee Yelp, illaa iyo inta aad weydiisatay oggolaanshaha dib u eegista inay sidaas sameeyaan.
Hubso inaad isticmaasho Astaanta Yelp ee la ansixiyay adoo sidaas samaynaya, adigoon badalin ama qalloocin.
Hubso inaad dib-u-eegista u nisbeyso Yelper-kii qoray, hana badalin luqaddooda ama qiimeyntooda.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa Yelp qalabkiisa gaarka ah si toos ah ugu dheji dib u eegista boggaaga.
Haddii ganacsigaagu u qalmo, waxaad heli kartaa 'Dadku Waxay Naga Jecel Yelp' daaqada ku dheggan.
Codso 'Na Raadi Yelp'
Si la mid ah isticmaalka la oggolaaday ee boggaaga, waxaad ku dari kartaa dib-u-eegis Yelp ah, oo aan beddelin oo ku saabsan qalabka daabacaadda caadada ah. Tusaale ahaan, waxaad raadsan kartaa rukhsadda Yelper si aad ugu muujiso dib-u-eegiddooda boodhadhka dukaamada, boorarka, buug-yaraha, xaashiyaha iyo hantida kale.
Dhammaan farsamooyinka kor ku xusan waxay raadinayaan inay kor u qaadaan wacyiga isticmaalayaasha Yelp ee kuwa kale ay si firfircoon dib ugu eegaan meheradda. Waxaad si tartiib tartiib ah laakiin si xirfad leh ugu xannaaneyneysaa halka ay u rogayaan oo ay go'aansadeen inay ku boodaan gawaarida isla markaana ku daraan dib u eegistooda.
4. Ka dhig Yelp Wadahadal Laba-geesood ah
Waxay si daacadnimo leh u noqon kartaa cabsi in laga hortago xaqiiqda ah in macaamiisha dadweynaha ay wadahadal joogto ah oo ku saabsan astaantaada ku leeyihiin meheradaha dib u eegista waaweyn sida Yelp. Cabsida dib u eegista waa ifafaale dhab ah oo sharci ah ee maaraynta sumcadda casriga ah, laakiin walwalka (iyo natiijooyinka ganacsiga) waxaa si weyn loogu beddeli karaa iyadoo si xeel dheer loo adeegsado howlaha jawaabta milkiilaha oo aalado badan ay bixiyaan. Astaantani waxay u saamaxdaa milkiilaha inuu ka jawaabo dhammaan dib u eegista, iyo wax badan baa la qoray ku saabsan awoodda foomkan suuq-geynta ah ee gebi ahaanba ka beddelaya xaaladaha xun. In yar ayaa laga sheegay awoodda jawaabaha milkiilaha wanaagsan dib u eegista si loo muujiyo mahadnaq iyo kobcinta kaqeybgal dheeraad ah.
Maaddaama dib-u-eegista wanaagsan ee Yelp ay yihiin macaamiisha ikhtiyaari ikhtiyaari ah u abuuraya ganacsigaaga, ma aha oo kaliya inay ku habboon tahay in loo mahadceliyo dib-u-eegeyaasha - sidoo kale waa hab aad u fiican oo lagu caddeeyo kuwa kale ee Yelpers sida aad ugu qanacsan tahay macaamiishaada. Milkiilaha meheradda oo waqti ku qaata inuu qoro qoraal kooban laakiin caadadii jawaabta oo muujineysa mahadnaq dhab ah waxay u muujineysaa dhammaan macaamiisha kale ee suurtogalka ah in waqtigooda iyo ereyadooda wanaagsan la qiimeyn doono. Mahadsanid mahadsanid oo lagahelay meheradda waxay udhaqmeysaa dhiirigelin dheeri ah oo dib loogu eego. Kumaa ku raaxeysanaya in la qadariyo?
Xusuusnow, sidoo kale, in Yelpers caan ah ay si firfircoon uga shaqeeyaan Yelp - waxay si dhab ah ugu raaxaystaan ​​wax ku qorista halkaas. U dir iyaga calaamad wanaagsan, oo aad la socoto joogitaanka jawaab celinta milkiilahaaga, inaad leedahay hiwaayad Yelp ah.
5. Ku Tijaabi, Adoo Maskaxdaada u leh
Tilmaamahan ayaa ugu habboon ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah ee dhisa xiriir dhab ah macaamiishooda. Qeybta wax iibsiga, tan waxaa ka mid noqon kara dukaamada buugaagta, dharka dharka lagu iibiyo, dukaamada hadiyadaha, istaaga beeraha, raashinka madaxa banaan ama dukaamada qalabka, ama ganacsiyada wax ka qabta dadyow gaar ah sida farshaxanada, muusikiistayaasha ama ciyaartooyda - in la xuso wax yar.
Haddii adiga, ama heerkaaga sare, xubnaha shaqaalaha aad ku kalsoon tahay aad xiriir dhow la yeelatay macaamiisha caadiga ah, ma jirto sabab aad shakhsiyan ugala hadli karin Yelp daqiiqad aan deg deg ahayn. Haddii aad ogaatid inay yihiin firfircoon Yelper, ma jiraan wax kaa horjoogsanaya inaad ka sheekeyso waxa ay u eg tahay milkiile ganacsi oo isku dayaya inuu ka shaqeeyo tilmaamaha Yelp ee aan waligaa toos u weydiisan dib u eegis. Ujeeddada tani ma aha in lagu maareeyo dareenka macaamilka - ujeedku waa in laga yeesho wadahadal laba dhinac ah oo ku saabsan doorka muhiimka ah ee sumcadda ganacsi ee bulshada aad la wadaagto. Muxuu macmiilkaagu ka qabaa siyaasada? Maxay kula tahay Haddii macaamilku u heellan yahay meheraddaada, wadahadalka sidan oo kale ah wuxuu ku dhiirrigelin karaa inay qaybtooda ka qaataan sidii albaabbadaadu u furnaan lahaayeen si ay ugu sii raaxaystaan ​​waxyaabaha aad bixiso.
Siyaasadda Yelp waxay ka timid ka go'naanshahooda xaqiiqda. Waxay rabaan dib u eegista inay noqoto mid aan eex lahayn, si loo hubiyo inay waxtar u leeyihiin dhammaan macaamiisha. Tani dhab ahaan waa macquul - qofna ma doonayo inuu sameeyo fikrad been ah oo ku saleysan dib u eegis been abuur ah ama dhiirigalin ah.
Tafaariiqleyda maxalliga ah, dhanka kale, way ogyihiin inay waajib ku tahay inay u tartamaan si ay u noolaadaan inta ay ku noolyihiin qiyamkooda asaasiga ah ee daacadnimada iyo caddaaladda. Maqaalkani wuxuu bixiyay talooyin dhowr ah oo looga faa'iideysanayo awoodda weyn ee Yelp si loo kiciyo dakhliga shirkaddaada, iyada oo aan lagu xadgudbin barxadda. Intaas ka sokow, waxay u taal Yelp, macaamiisha ay u adeegaan, iyo ganacsiyada kaqeybgalaya inay sii wadaan sahaminta waxa ka dhigaya siyaasad caddaalad dadka oo dhan. Markaad tixgeliso dhammaan dhinacyada, waa dood u baahan in la sii wado.
Ma hubo waxa laga sheegayo ganacsigaaga Yelp marka hore? Mise culeys ayaa saaran oo ma hubo halka laga bilaabayo? Moz Local ayaa dhawaan kaa caawin doonta inaad sheegato oo aad maamusho joogitaanka ganacsigaaga ee Yelp iyo inaad ka jawaabto dib u eegista ay weheliso astaamaha maareynta raadinta maxalliga ah ee adag ee ka dhex jira barnaamijkooda.
Tags: kala duwanaanta buurtaqalabka colesicir-dhimista dhisayaashablog injineernimadaNaga Raadi YelpUruurintaGetFiveStarsdarajooyinka caafimaadkacaqliga lo'damaxaliga ahGanacsiga maxaliga ahmuuqaalka deegaankanidaamka muuqaalka deegaankalowe waaHorumarinta Guryaha Lowemozdeegaanka mozmaqaayadahaReviewsSan FranciscoTripadvisordhiirranaanYelpblog yelpsiyaasada yelptaageerada yelptilmaamaha yelpqaylo
Feb 2, 2017 markay ahayd 10:16 PM
Maqaal aad u fiican, laakiin waxaan qabaa su'aal. Waxaad dhahdaa:
"Muuji dib u eegistaada ugu wanaagsan ee Yelp, illaa iyo inta aad weydiisatay oggolayaasha inay oggolaadaan."
Maxaad ugu baahan tahay ogolaansho haddii dib u eegista lagu dhejiyay si guud?
Feb 4, 2017 markay ahayd 4:26 PM
Waad ku mahadsantahay weydiinta su'aal wanaagsan. Waa shuruudaha u gaarka ah ee Yelp ee ah inaad sidan sameyso, mid ka mid ah qodobbada aan ku xiriiray qaybtaan. Malahayga waa sida Yelp ay u aragto inay tahay in dib u eegaha uu ogolaaday in hadaladooda laga dhigo Yelp iyo goobaha ay Yelp wax u qeybiso - ma aqbalin in hadaladooda lagu shaaciyo websaydhka shirkada saddexaad. Marka, waxaan sii marayaa shuruudaha Yelp u gaarka ah halkan, laakiin sidaan idhi, waxaan u maleynayaa inay dhab ahaantii jirto baahi loo qabo Yelp inay sii wado baaritaanka milkiilayaasha ganacsiga waxa ka dhigaya siyaasad cadaalad ah. Waxaan rajeyneyaa inay tani caawinayso!